Booliska Göteborg oo rag masaajid ku xayiray | Somaliska
Booliiska magaalada Göteborg ayaa lagu eedeeyay in ay rag Muslimiin ah 00 8 qof gaaraya ay masaajid ku xayireen mudo dhowr saacadood ah. Arintaan ahaa dhacday 30kii bishii Oktoobar markii ay boolisku ka war heleen digniin weeraro argagixiso taasoo dhalisay in ay soo xiraan dhowr qof, balse markii dambe ceeb ka dhacday oo la sheegay dadka la soo xiray in aan waxba lagu tuhmin. Warbixintaan ugu dambaysa ayaa sheegaysa in masaajid ku yaala xaafada Gårdsten ay ku xayireen boolisku 8da nin ayadoo loo diiday in ay ka baxaan masaajidka ama warbixin la siiyo, xitaa oday waayeel ah oo la sheegay in uu u baahnaa daawo ayaa loo diiday in uu ka baxo masaajidka. Booliska ayaa sheegay in ay masaajidka weerareen waayo mid ka mid ah raga la tuhunsanaa ayaa la sheegay in uu masaajidka ku tukan jiray salaada subax, balse raga lagu xayiray masaajidka ayaan dhamaantood wax dambi ah lagu tuhunsaneyn. Booliska ayaa raali galin ka bixiyay dhacdada ka dib kulan dhex maray Ahmed Al-Mofty oo ah madaxa Jaaliyda Muslimiinta iyo Taliyaha booliska ee Göteborg. Axmed ayaa sheegay in booliisku aysan sidaas u dhaqmi lahayn haddii ay gali laheen kaniisad ama goobta ay yuhuudu wax ku caabudaan. Ragii xayiraada lagu sameeyay ayaa sheegay in aysan wax daba gal ah ku sameyn doonin arinta oo ay halkaa uga harayaan.
Booliska Göteborg oo rag masaajid ku xayiray
Booliiska magaalada Göteborg ayaa lagu eedeeyay in ay rag Muslimiin ah 00 8 qof gaaraya ay masaajid ku xayireen mudo dhowr saacadood ah. Arintaan ahaa dhacday 30kii bishii Oktoobar markii ay boolisku ka war heleen digniin weeraro argagixiso taasoo dhalisay in ay soo xiraan dhowr qof, balse markii dambe ceeb ka dhacday oo la sheegay dadka la soo xiray in aan waxba lagu tuhmin.
Warbixintaan ugu dambaysa ayaa sheegaysa in masaajid ku yaala xaafada Gårdsten ay ku xayireen boolisku 8da nin ayadoo loo diiday in ay ka baxaan masaajidka ama warbixin la siiyo, xitaa oday waayeel ah oo la sheegay in uu u baahnaa daawo ayaa loo diiday in uu ka baxo masaajidka.
Booliska ayaa sheegay in ay masaajidka weerareen waayo mid ka mid ah raga la tuhunsanaa ayaa la sheegay in uu masaajidka ku tukan jiray salaada subax, balse raga lagu xayiray masaajidka ayaan dhamaantood wax dambi ah lagu tuhunsaneyn.
Booliska ayaa raali galin ka bixiyay dhacdada ka dib kulan dhex maray Ahmed Al-Mofty oo ah madaxa Jaaliyda Muslimiinta iyo Taliyaha booliska ee Göteborg.
Axmed ayaa sheegay in booliisku aysan sidaas u dhaqmi lahayn haddii ay gali laheen kaniisad ama goobta ay yuhuudu wax ku caabudaan. Ragii xayiraada lagu sameeyay ayaa sheegay in aysan wax daba gal ah ku sameyn doonin arinta oo ay halkaa uga harayaan.
Xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna oo sheegay in uu yaraynayo dhaleecaynta soogalootiga